၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ | м м ť ђ ĩ ŋ ķ є я ကိုသင်ကာ
၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ	Posted by mm thinker on February 14, 2008
Posted in: Essay, Experience.	Tagged: Experience.	Leaveacomment
၂၂.၁ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က အလည်လာမည်ပြောသည်။ ကိုယ်ကလည်း တွေ့ချင် စကားပြောချင်နေတဲ့သူ။ ဘယ်နေ့လာဖြစ်မလဲဆိုတော့ ၂၂ ရက်နေ့တဲ့။ ၂၂.၂ ကျောင်းဝင်ခွင့်လျှောက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ရုံးက ၀န်ထမ်းမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ကူညီပေးနေရာ ဟိုနေ့က လျှောက်လွှာတင်ဖြစ်သွားသည်။ အင်တာဗျူးဖို့ ဘယ်နေ့ရက်ချိန်ပေးလဲမေးလိုက်တော့ ၂၂ တဲ့။
၂၂.၃ ကောင်မလေးက သူ့ပေပါ Seminar မှာ Presentation လုပ်ရမှာတဲ့။ ပြင်ပြင်ဆင်ဆင်။ ဘယ်နေ့လဲဆိုတော့ ၂၂ တဲ့။ ၂၂.၄ ဒီနေ့ ပါမောက္ခနဲ့ တွေ့ပြီး Discussion လုပ်တယ်။ နောက်တစ်ခါပြီးရင်တော့ Exam ထိုင်ကြစို့တဲ့။ နောက်တစ်ပတ် ဖိလစ်ပိုင်ကို သူသွားစရာရှိတယ်တဲ့။ ဒါဆိုဆရာဘယ်နေ့ ပြန်ရောက်မလဲဆိုတော့ Twenty Second…. ၂၂ တဲ့။
← Salute to the Greatest Leader of Burma	သိုးကလေ (Poem of Bagan Period) မြန်မာ+အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန် →	0 comments on “၂၂၊ ဖေဖော်ဝါရီ”
seinmama on February 14, 2008 at 9:16 pm said:
Reply	j on February 19, 2008 at 7:20 am said:
Reply	thinker on February 19, 2008 at 1:20 pm said: